यसो भएमा मात्रै ट्रम्पले ह्वाइटहाउस छोड्ने ! - Media Dabali
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इलेक्टोरल कलेज (निर्वाचक प्रतिनिधि)हरुले आफ्ना प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनले जितेको औपचारिक घोषणा गरेमा ह्वाइट हाउस छाड्ने बताएका छन् ।
ट्रम्पले चुनावको नतिजालाई अस्वीकार गर्ने अभूतपूर्व प्रयास गर्नु भएको थियो । चोरी मतपत्रको बारेमा भ्रम फैलाउँदै र अदालतमा शृंखलाबद्ध मुद्दा दायर गरेर कानुनी चुनौतीहरू दिएका थिए । तर अदालतले ट्रम्पले लगाएका आरोपहरुमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको जनाउँदै निवेदनहरु खारेज गरिदिएका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा विजयी हुने उम्मेदवारको औपचारिक छिनोफानो इलेक्टोरल मतले गर्दछ । हाल डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रत्यासी जो बाइडेनले ३०६ र डोनाल्ड ट्रम्पले २३२ मत प्राप्त गरेको देखिएको छ। संविधान अनुसार कूल ५३८ इलेक्टोरल मत रहेको अमेरिकामा २७० मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छन् ।
कोरोना विरुद्धको खोपको मतलब छैन, लकडाउन खोलिन्छः ट्रम्प
डोनाल्ड ट्रम्प नोबल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनित
खोपको बारेमा ट्रम्पको कुरामाथि विश्वास नगर्ने : बिडेन
डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई किन दिए बधाई ?
आज राति ट्रम्प र बाइडेन आमने सामने हुँदै, के हुँदैछ अमेरिकामा ?
कोरोना भएपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प अस्पताल भर्ना
शनिवार, आश्विन १७ २०७७०६:०८:०२